China ASTM A36 HRC Inopisa Yakakungurutswa Simbi Strip fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Iyo yakafara inopisa yakakungurutswasimbistrip ishoma pane kana kuenzana ne600mm, uye ukobvu i1.2-25mm.Inopisa yakakungurutswa simbi tambo ine simba rakaderera uye yakashata yepamusoro mhando (oxidation/kupera kwakaderera), asi plastiki yayo yakanaka.
3.Upamhi: ~ 600mm
1.Hot rolled steel strip inoputirwa pakupisa kwepamusoro uye ine ductility yakanaka.
2.Hot yakakungurutswa simbi tambo inogona kuva yakakura ukobvu.
3.Hot rolled steel strip ine kuoma kuri nani.
4. Musiyano pakati pesimbi inopisa yakakungurutswa uye inotonhora yakakungurutswa:
Cold-akakungurutswa simbi tambo ine yakaderera kuomarara nekuda kweimwe dhigirii yekuomesa basa, asi inogona kuwana yakanaka goho reshiyo, uye inogona kushandiswa kutonhora kukotamisa zvitubu nezvimwe zvikamu.Panguva imwecheteyo, nokuti nzvimbo yegoho iri pedyo nekusimba kwesimba, hapana kufanoona kune ngozi panguva yekushandiswa, uye njodzi dziri nyore kuitika kana mutoro unopfuura mutoro unobvumirwa.
1) Iyo inotonhora ndiro inotonhora-yakakungurutswa uye haina chikero pamusoro payo uye yakanaka mhando.Kupisa-akakungurutswa esimbi ari kupisa-akakungurutswa, ane chiyero pamusoro pepamusoro uye kusiyana kweukobvu.
2) Kupisa kwakatenderedzwa simbi tambo ine kusimba kwakashata uye kutsvedzerera kwepasi, uye mutengo wayo wakaderera, nepo inotonhora yakakungurutswa simbi tambo ine yakanaka extensibility uye kuoma, asi mutengo wayo wakakwira.
3) Kukungurutsa simbi tambo yakakamurwa kuita inotonhora kukunguruka uye inopisa kukunguruka, ine recrystallization tembiricha senzvimbo inosiyanisa.
4) Cold rolling: Cold rolling inowanzo shandiswa kugadzira strip ine high rolling speed.Inopisa yakakungurutswa simbi tambo: inopisa inopisa tembiricha uye tembiricha yefogi
5) Pamusoro pesimbi inopisa yakakungurutswa simbi isina electroplating yakasviba yakasviba, nepo iyo inotonhora yakakungurutswa simbi isina electroplating ine grey, iyo inogona kusiyaniswa nekutsvedzereka kwepamusoro mushure me electroplating, uye kutsvedzereka kwesimbi inotonhora yakakungurutswa yakakwirira kupfuura. iyo yesimbi inopisa yakakungurutswa.
Inopisa yakakomberedzwa simbi tambo yakakodzera kugadzira zvikamu zvakagadziriswa nekutonhora kuumba, General kuvakwa kwezvivakwa, mabhiriji, ngarava, mota, nezvimwe.